ဈေးရွှေ့ပြောင်းမှု နေရာ မလုံလောက်၍ ဆန္ဒပြသူများကို ဖမ်းဆီး | Ko Oo + Ma Thandar
« ကြေးမုံ သတင်းစာ ပုံစံပြောင်း ထုတ်မည်ဟု ဆို
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို ဆေးစစ်၊ တိုက်ပွဲများ ဆက်ဖြစ်ဆဲ »
ခိုင်သွယ်	Saturday, 25 December 2010 14:47 – ဧရာဝတီ
ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အစောပိုင်းက တွေ့ရသော သီရိမင်္ဂလာဈေး။ (ဓာတ်ပုံ – Popular News)
This entry was posted on December 25, 2010 at 12:03 pm and is filed under ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.